Ukhethe ukugxila emakhaya olapha amehlo
Boniswa Mohale | September 3, 2020
NGESIKHATHI ozakwabo bevula amabhizinisi emadolobheni, uNksz Duduzile Ntandoyenkosi Sibisi (25) uvule ibhizinisi elisiza abahlushwa amehlo eTugela Ferry, KwaZulu-Natal, iSibisi Optometrist.
Le ntokazi ezalelwe eDannhauser, ineBacher of Optometry ezithole eNyuvesi yaKwaZulu-Natal lapho ifunde khona kusukela ngo-2013 kuya ku-2016.
Itshele Isolezwe ukuthi emva kokuphothula iziqu zayo isebenze eTorga Optical, e-East London, kusuka ngoMashi 2017 kuya kuJulayi 2017.
“Ngesikhathi ngisebenza bengifuna ukuthi igama lami libe khona ukuze ngithi uma sengiboleka imali yokuqala ibhizinisi kube lula ukuthi ababolekisa ngemali babone ukuthi ngiyakwazi ukukhokhela izikweletu zami. Ngibuye KwaZulu-Natal ngo-Agasti ngo-2017, ngase ngivula ibhizinisi iSibisi Optometrists eTugela Ferry ngoNovemba 2017,” kusho uNksz Sibisi.
Uthe ngoJulayi 2019 uvule igatsha lesibili leSibisi Optometrists, eliseCentral Medical Centre, eMgungundlovu, khona usebenzisana noMnuz Sthembiso Bhengu amqashe njengodokotela wamehlo kuleli gatsha.
“Ngesikhathi ngiqala ukwenza iziqu ze-optometry ngangingazi kakhulu ngalo mkhakha kodwa ngangena kuwo ngoba ungajwayelekile. Ngiwuthandile sengiphakathi ngabona ukuthi ngizokwazi ukuvula ibhizinisi lami uma sengiqede iziqu. Bengenza ucwaningo lokuthi kudingeka malini ukuze ngibe nenkampani yami. Ngifuna ukuthuthukisa impilo yabantu basemakhaya ngokuqinisekisa ukuthi banamehlo asesimeni esifanele. Yingakho ibhizinisi lami lisendaweni esemakhaya,” kusho uNksz Sibisi.
Uthi icebo lokusebenzela eCentral Medical lavela emuva kokuxoxa nodokotela ababili okuwuDkt Sanele Mdluli obhekelele zonke izifo noDkt Saziso Mthembu, owudokotela wamazinyo ababona kungcono ukuthi bavule isikhungo sezempilo sodokotela abamnyama.
“Saqala ukusebenza ndawonye ngoMashi 2019, sakwazi ukuvula ngoJulayi 2019, sisasebenza namanje eCentral Medical Centre, eMgungundlovu. Kukhona udokotela wezifo zonke, owamazinyo, owamehlo, occupational therapist, physiotherapist, social worker, dietician ne-clinical psychologist.”
Uveze ukuthi akulula ukuba wusomabhizinisi omnyama omncane kodwa izingqinamba uyazinqoba ngokuxoxa nozakwabo abawodokotela nabantu athenga kubo impahla nokuhlonipha wonke umuntu asebenzisana naye okubalwa neziguli zakhe.
Le ntokazi ithe ifuna ukuvula ibhizinisi lokusiza abanenkinga yamehlo njalo ngonyaka ezindaweni ezihlukene ezisemakhaya ngoba ifuna ukukhombisa abesifazane ukuthi kuhle basebenze, nokufundisa imiphakathi ngokubaluleka kokunakekela amehlo.
Abantu ethi bayigqugquzelayo le ntokazi ngunina nomndeni wakoninalume.
Iphethe ngokuthi ifuna nokwenza iziqu zeMasters nePHD ukuze igcine isifundisa abafundela ukuba wodokotela bamehlo ezikhungweni zemfundo ephakeme.
Eminye imininingwane ngeSibisi Optometrists iyatholakala emakhasini ayo kaFacebook, Twitter naku-Instagram.